Sekta manondrana olona : Vehivavy iray nidoboka am-ponja tany Mahajanga – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2015 → octobre → 27 → Sekta manondrana olona : Vehivavy iray nidoboka am-ponja tany Mahajanga
Sekta manondrana olona : Vehivavy iray nidoboka am-ponja tany Mahajanga
Redaction Midi Madagasikara 27 octobre 2015 4 Commentaires
Tena lasa tokoa ilay zaza ary any Kenya no toerana nandehanany. Niainga tamin’ny fandrokidrokiana renim-pianakaviana iray sahirana tao amin’ny toeram-pivavahan’ny sekta iray ao an-toerana ny raharaha. Rehefa nifandresy lahatra ela teo ny roa tonta, nanampy trotraka ihany koa moa ny pasitera, dia tapa-kevitra ilay ramatoa ny hanome ny zanany vavy vao enin-taona. Nihodina anefa ny tantara taty aoriana kely, ka nitarika ny fametraham-pitorian’ilay renim-piankaviana teo anivon’ny zandary. Nohamarinina nandritra ny fanadihadiana ny taratasy rehetra nahafahana nandefa ilay zaza. Teo dia nivohitra fa sady tsy nisy ny taratasy ara-pitsarana nahafahana nanao izany. Tsy nisy ihany koa ny taratasy avy amin’ny ray aman-drenin’ilay zaza, ka nanome alàlana ny zanany na koa nanome alàlana olon-kafa hanangana azy. Nipoitra teo fa endrika hala-jaza mba nentina nanondrana azy no niseho. Notazonina am-ponja vonjimaika ilay ramatoa “mpanampy ny mahantra” kanefa ny ao ambadikany dia endrika fanondranana olona no tena mety ho antony. Ilay pasitera kosa nahazo fahafahana vonjimaika ary samy miandry ny fitsarana azy izy ireo. Manomboka voaporofo izao ny hetsik’ity fiangonana zandriny iray ity eto amin’ny firenena. Ny nahatalanjona dia tsy mba nisy na dia fanadihadiana nisokatra akory aza teto Andrenivohitra taorian’ny fitarainan’ny mpikambana ao aminy, fa misy tsy mazava ny fandefasana olona any Canada. Sady tsy mitombina ny fisian’ilay oniversite no mbola nangalàna vola ihany koa ny tanora maro. Dia mitohy ara-dalàna, toa ny tsy misy na inona na inona anefa, izany hatramin’izao…
RAZ 24 mars 2020 at 19 h 50 min · Edit
Tsy aiko alo na finoanompoana fa za dia nahazo fanasitranana tamina Fiangonana Sekta fa tamin’ny 2008 za voan’ny cancern’ny nono ary tsy nihinana na comprimé iray za nefa de sitrana soamantsara tamin’ny alalan’ny vavaka sy fametrahan-tanàna. Ka tsy aiko na zany no finoanoampoana. Asa na zany no Fiangonana tokon hakatona na ny Fiangonana mamela malalaka ny fijangajangana, ny lainga, ny kolikoly, ny fanandratan-tena, ny fanambonin-tena sns… Za alo de manao ampahafolon-karena sy fanatitra, zay sitrapoko no anaovako azy fa ts oe zazakely ah ka mety horebirebena fa mato ataoko de fantatro fa mety. Ka ho an’ny olona mitsikera befahantany anay SEKTA dia tokon hamakafak fa mato ny olon met hando ampafolonkaren sns de ao ny anton fa ts zazakel akor ireo olon SEKTA amanapitrisany reo ka met horebireben fa mato tamana ao amin’ny SEKTA de mis ny antony.
R.A.Z 24 mars 2020 at 11 h 39 min · Edit
Asa na finoanoam-poana fa ra za zay manoratra aloha dia nahita fahagagana tao amin’ny fiangonana SEKTA fa voan’ny cancern’ny nono aho t@ 2008 dia sitrana tao amin’io SEKTA io, tsy mba nihinana za na fanafody 1 fa dia sitrana soamantsara, efa ho 12 ans passé zay ny nahasitranako. Ka asa na zany no finonoampoana, za ko tsy zazakely ka ho rebirebena fa fantatro zay inoako na na hando ampahafolonkarena za na hanao fanatitra hoatrinona dia sitrapoko zay fa ts zazakely ah ka tsy hafantatr zay tokony hatao. Asa na Fiangonana mitondra fanasitranana hôtr’izany no tokony hakatona, na ny fiangonana mijery fotsiny ny fijangajangana, ny kolikoly, sns….
kotobekibo 29 octobre 2015 at 8 h 31 min · Edit
Aza atao anaty kitapo iray daholo ny Fiangonana zandriny rehetra, ekena fa misy manondrana ny vitsivitsy, sahala @ ireto Fiangonana « Zokiny » koa, misy ny pedophiles, sns, …
Raha ny logique-nao zany dia tokony hakatona daholo ny Fiangonana zokiny rehetra koa.
Marika 27 octobre 2015 at 16 h 02 min · Edit
Mbola manainga ny sain’ny fanjakàna hatrany izahay mba handrava ny secte rehetra misy eto Mcar
Ny tanjon’izy ireny dia ny fangalana hatrany ny fananan’olona , indrindra fa ny mahantra no tena lasibatra.
Betsaka ireo misora-tena ho pasitera tsy fantam-piaviana ka misandoka ho olo-masina sy mahavita fahagagana.
Miraitra @ 4X4 sy garde du corps kanefa dia sandoka avokoa no lazainy.
Mampalahelo ny gasy kely mino fatratra azy ireny ary manefa lafo @ finoanoam-poana.